Ikozvino kune mirwi yemasevhisi ekutumira mameseji akatenderedza, asi WhatsApp ine mirwi yezvinhu uye inoshandiswa zvakanyanya - iyo Facebook-inopihwa app inoti ine vanopfuura mabhiriyoni maviri evashandisi pasi rese, izvo zvinoshamisa.
Mumwe munhu angave akakutumira kero yake kana kuti ungarangarira uchitaura nezvechirongwa chakati kana firimu asi haudi kupururudza mumameseji ako ese kuti uedze kuwana zvauri kutsvaga. Pamusoro pekutaura kwako kwese paIOS pane bhaa yekutsvaga kana ukadonhedza pasi. On Android, pane chiratidzo chekutsvaga.
iOS: Chats> Chat chat> Tinya pane contact info kumusoro> Tinya bhatani reKutsvaga> Nyora mubhara rekutsvaga rinoonekwa pamusoro peiyo chat chaiyo.
WhatsApp inoita kuti zvive nyore kubata izvo zviri kutora kuchengetedza pane chako kifaa. Kwete chete iwe unogona kuona kuti ndedzipi chats dzakanyanya kuchengetedza sepamusoro, asi iwe unogona zvakare kuona kuti ndeapi mafaera akakura kupfuura 5MB uye mafaera akatumirwa kakawanda.
Zvese zviri zviviri webhu uye desktop app inoshandira chats uye chenjedzo pakombuta yako, zvichikubvumidza kuti upindure nekukurumidza uye zviri nyore. Verenga zvimwe pamusoro pekuti inoshanda sei mune yedu yega ficha.
Gadzirisa Wallpaper kune chaiyo chats
Iro zano riri pamusoro rinokutendera kuti uise iyo yakafanana Wallpaper kune ako ekutaura chats asi kana iwe uchida chats chats kuti ive chaiyo Wallpaper, unogona kuita izvi futi.
iOS: Chat chat> Wallpaper & Sound> Sarudza Wallpaper Itsva> Sarudza kubva pane zvaungasarudza.
Android: Chat chat > ​​Wallpaper > Shandura
Kubatidza Dippearing Messages kuchaita kuti chero meseji nyowani muchat ipere mushure memaawa makumi maviri nemana, mazuva manomwe kana makumi mapfumbamwe. Rangarira mameseji anogona kuchengetwa kumwe kunhu zvakadaro. Unogona verenga zvakawanda nezve Kunyangarika Meseji mune yedu yakasarudzika ficha. Zvinogoneka kuibatidza kuitira chats chaidzo, kana chats dzese.
Kune chats chaidzo:
iOS & Android: Chat chat> Dzvanya pazita remunhu wacho kumusoro kwechat> Disppearing Messages> Sarudza meseji timer.
Kune ese chats:
iOS & Android: Settings> Account> Privacy> Default Message Timer> Sarudza nguva.
Tumira mufananidzo kana vhidhiyo inonyangarika
Zvinogoneka kutumira mufananidzo kana vhidhiyo inonyangarika kana mugamuchiri akaiona kamwe chete. Izvi zvakanakira mafoto epassword kana yebhangi semuenzaniso ane ruzivo rwakadzama. Kana iye anogamuchira akavhara mufananidzo wako, unonyangarika, asi rangarira, vanogona kutora skrini. Unogona kuverenga a kupatsanurwa kuzere kwechikamu muchikamu chedu chakasiyana.
iOS: Chat chat> Tinya pa“+” padivi penzvimbo yekupinda meseji> Sarudza 'Kamera' kutora foto kana 'Mufananidzo & Vhidhiyo Raibhurari' kusarudza foto> Sarudza foto> Tinya pa“1” padivi pebhuruu. tumira museve > Dzvanya museve webhuruu kutumira.
Android: Chat chat> Tinya papepaclip padivi penzvimbo yekupinda meseji> Sarudza 'Kamera' kutora foto kana 'Garari' kuti usarudze foto> Sarudza iyo foto> Tinya pa "1" padivi pebhuruu kutumira museve> Dzvanya iyo museve weblue wekutumira.
Maitiro ekukiya WhatsApp pa iPhone
iOS & Android: Chats> Chat chat> Tinya maikorofoni kurudyi kwebhokisi remeseji> Dzvanya uye ubate maikorofoni> Swipe kumusoro kukiyi. Maikorofoni inozovharwa parekodhi kusvika watumira meseji. Iwe unogona kutarisa inoti yezwi usati watumira neiyi nzira, pamwe nekumbomira uye kuenderera.
Kurumidza kutamba meseji yezwi
Iwe unogona kukurumidzira kutamba kwemeseji yezwi ne1.5x kana 2x, zvichikutendera kuti uteerere kune mameseji marefu nekukurumidza. Zviri nyore kuita uye hazvichinji manzwi ezwi remunhu.
iOS & Android: Chats> Chat chat> Tinya chiratidzo chekutamba padivi pemeseji yezwi yaunoda kukurumidzira> Tinya pane 1x icon inoratidzika kuti iite 1.5x> Tinya 1.5x kuti iite 2x nekukurumidza> Tinya iyo 2x icon kuti uchinje kudzokera ku 1x.
iOS: Chats> Vhura iyo group chat / chat> Tinya iyo nyaya kuti uwane iyo Group Info / Bata Info skrini> Nyarara> Sarudza kuti unoda kuinyararidza kwenguva yakareba sei. Iwe unogona kusarudza pakati pe8 maawa, 1 vhiki kana Nguva dzose.
Kuti uve nechokwadi chekuti haurasikirwe nechero chats dzako kana ukarasikirwa nechishandiso chako kana chinja maturusi, ita shuwa kuti unodzosera chats dzako kuICloud kana Google Drive. Ziva kuti chats dzakachengetwa hadzisisiri encrypted.
Fambisa WhatsApp chats kubva iOS kuenda Android
Zvaimbonetsa kubva paWhatsApp chats kubva kuIOS kuenda kuAndroid, kunyangwe zvave nyore ikozvino nekutenda.
iOS: Zvirongwa> Chats> Fambisa Chats kuAndroid> Tevedzera matanho.
Nzira yekuderedza kuwanda kweAssapp pane iPhone yako